Ngokubanzi - Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi (Iphepha 16)
I-Web Messenger MSN ikuvumela ukuba usebenzise umthunywa ngaphandle kokufaka nayiphi na inkqubo. Inyathelo ngenyathelo lesifundo sendlela yokusebenzisa uMessenger ngaphandle kokufaka nantoni na kwiPC yakho.
Ubuqhetseba, ukuloba okanye ukunyanga, ayinamsebenzi ukuba ipelwe ngokuchanekileyo okanye ngokungachanekanga, nangayiphi na indlela la magama mathathu asetyenziselwa ukufunda okungakumbi malunga nengxaki efanayo, ukubiwa kweekhowudi zokufikelela kwi-intanethi ebhankini.
Yintoni iMeme? Ukuthatha ithuba kwimeme yam yokuqala ndiza kukuxelela into endiyicinga ukuba yi-meme, ulumke! Ayisiyiyo inkcazo esesikweni ye-meme, yile nto eyi-wikipedia.
Ukubhalisela i-RSS feed kukuvumela ukuba waziswe malunga nento epapashwe kwiwebhusayithi. Funda ukusebenzisa iiFeed ngale ncwadana yenyathelo ngenyathelo.
Okokugqibela.FM yindlela entsha yokufumana umculo kwi-intanethi. Dibana namaqela amatsha kunye namagcisa ngokwenza iakhawunti yasimahla kwiLast.fm ngoncedo lwale nyathelo ngenyathelo.
Ngaba ufuna ukunqanda ukuhlaziya uMthunywa wakho? Ufuna ukubuyela kuhlobo lwangaphambili loMthunywa? Ukuqhubeka usebenzisa inguqulelo yakho ye-MSN, funda le nyathelo ngenyathelo ngenyathelo.
Uyifaka njani i-mp3s yakho ngevolumu efanayo kwaye uphephe ukunyuka kwevolumu phakathi kwengoma nengoma
Ngaba ii-mp3s zakho zivakala nganye ngevolumu eyahlukileyo? Funda le ncwadana kwaye uza kubona ukuba ungalungisa njani umsindo wee-mp3s ngokulula.
Ukujonga iphepha le-50.000. Isikhululo esilandelayo 2.000 iindwendwe zemihla ngemihla
Ngaphezulu kwamaphepha angama-50.000 alayishwe enkosi kuwe. Umbuliso omuncu.
MP3Gain. Incwadana yokufaka kunye neSpanish yokuguqulela iMP3Gain
I-MP3Gain ikuvumela ukuba uguqule zonke ii-MP3s zakho ngevolumu efanayo ukuze ungabi sisithulu phakathi kweengoma. Funda incwadana yokufumana i-MP3 ukuze wazi ukuba ungakuphepha njani ukutsiba ngevolumu.
Nika isipho nge-44 XBox 360. Ungayiphumelela njani i-Xbox 360 yasimahla nge-MSN kunye neBuddy
Ukunikwa kwe-Xbox 360. Thatha inxaxheba simahla kwiijelo zeMSN.es kwaye uphumelele i-XBox360 ngokungena kumzobo weeveki ezimbini ukhuphiswano
Izandiso zefayile. Zeziphi kwaye ungazibona njani izandiso ezifihliweyo
Ukwandiswa kwetes kukwazisa ukuba yeyiphi ifomathi yefayile, kodwa izandiso zifihliwe ngokungagqibekanga kwiWindows. Ukuba ufuna ukwazi indlela yokubona izandiso, qhubeka ufunda le ncwadana p
Naphi na FM. Uyenza njani iakhawunti naphi na.FM ukumamela umculo wakho naphina
Naphi na apho i-FM ikuvumela ukuba umamele umculo owuthandayo naphina. Jonga ukuba kulula kangakanani ukwenza iakhawunti yakho ye-Anywhere.fm kwaye uqalise ukulayisha iingoma ngeli nqanaba ngenyathelo ngenyathelo.
ICompressor-decompressor ye-IZArc. Uyifaka njani i-IZArc isinxibelelanisi sasimahla seefomathi ezininzi kwaye ulibale nge-WinRar
IZArc sisicinezeli sasimahla esifumaneka ngeSpanish (nangaphezulu kweelwimi ezingama-40) esinika enye indlela yasimahla kwiWinRAR okanye iWinZip. Ngale ncwadana uza kubona indlela yokufaka i-IZArk ngokulula kwaye inyathelo ngenyathelo.
Ndingahamba njani kwiWindows Live Hotmail entsha kwi-MSN Hotmail endala? Ngaba awunakubuyela kuhlobo lwangaphambili?
Ngaba ndingabuyela kwinguqu yangaphambili ye-Hotmail? Ukuba uyazibuza ukuba ungabuyela kwinguqulelo yakudala ye-MSN Hotmail yakudala, kuya kufuneka wazi ukuba akusekho kubuya kwiWindows Live Hotmail.
Yonke imihla kuzalwa umntwana owanyayo. Musa ukuba ngomnye wabo
Ukuba uqhubeka nobomi ngaphandle kokuthatha amanyathelo okhuseleko uya kuhlawula iziphumo. I-Intanethi ithobela umthetho omnye kwaye ke kuya kufuneka ulumke ngomsebenzi wakho kwinethiwekhi. Qhubeka ufunde ....
Uzijonga njani iifayile ezifihliweyo. Fumana iifayile ezifihliweyo kwikhompyuter yakho
Uzijonga njani iifayile ezifihliweyo. Ukubona iifayile ezifihliweyo kwikhompyuter yakho kulula kakhulu, landela nje le ncwadana inyathelo ngenyathelo kwaye uza kubona ukuba ubona iifayile ezifihliweyo kwiPC yakho.
Idiski enzima igcwele? Uyonyusa njani indawo kwi-hard drive yam.
njenge, inzuzo, indawo, idiski, ikhululekile, isayizi, ilahlekile, yandisa, yandisa, iidiski, idiski enzima, idiski enzima, incwadana, isifundo, iviniga
I-Gmail. Uyenza njani iakhawunti yeGmail ngaphandle kwesimemo
Uyenza njani i-Gmail. I-Gmail ikunika i-imeyile yasimahla ngaphandle kwesimemo. Kule ncwadana uza kubona ukuba uyenza njani iakhawunti, into oyifunayo, into ebonisayo, njl. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi nge-imeyile ye-Gmail, qhubeka ufunda.
IWindows Live Hotmail ngeSpanish. Ndingalutshintsha njani ulwimi lwe-imeyile yam eshushu?
IHotmail iza ngokungagqibekanga ngesiNgesi, ukuba ufuna ukufunda ukuyibeka ngeSpanish, ungathandabuzi ukufunda le ncwadana yokutshintsha ulwimi lweWindows Live Hotmail ukuya eSpanish ...
I-AIMP yesiqhelo. Incwadana yokufaka kunye noqwalaselo lokuqala
I-AIMP Classic ngowona mdlali ubalaseleyo endakha ndazama. Funda indlela yokufaka kunye nokumisela i-AIMP Classic ngeVinagre Asesino inyathelo ngenyathelo ngenyathelo.
YEKA iYouTube. Ungayimisa njani ividiyo edlala kwiYouTube
Beka iqhosha lokumisa ecaleni kweevidiyo zakho zeYouTube ukuyeka ukuzilayisha. I-Greasemonkey ikuvumela ukuba uyenze ngokulula ...
ISouth Studio Studio. Uyenza njani i-avatar yakho ye-South Park
Yenza eyakho iPark avatar yasimahla ngaphandle kokufaka nantoni na. Ukuba ufuna ukuba nodoli wakho ovela kuthotho lwePaki yaseMzantsi, qhubeka ufunda le ncwadana ...
Prometeus (ngeSpanish). Umhla uGoogle uya kusilawula sonke
I-Prometeus: Ngaba uGoogle uya kuze asilawule? Kule vidiyo inomdla kakhulu ungabona ukuqikelela ukuba kwixa elizayo uGoogle uya kulawula yonke into ngenkqubo yakhe ye-Prometeus. Sukuphoswa yiyo. Reco
Imuvi yeSimpsons. Uyenza njani i-avatar yakho yeSimpsons
Yenza i-avatar yakho yeeSimpson. Kule vidiyo tutorial uya kubona ukuba i-avatar eyenziwe ngokwakho ye-Simpsons movie yenziwa ngokulula kwaye inyathelo ngenyathelo.
Uyifaka njani iWindows Live Messenger
I-Windows Live Messenger entsha ifaka ngokulula kwaye kule ncwadana iya kuba lula ngakumbi. Funda indlela yokungena kunye nokungena kwi-Messenger
I-alaplaya ikunika imidlalo emithathu emnandi yasimahla kwi-Intanethi ngeSpanish. Yonwabela abadlali bayo abaninzi ebusweni.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba i-eMule igcina phi iikhredithi zakho ukuze ungalahleki emva kwazo? Qhubeka ufunda ndicacisa yonke into inyathelo ngenyathelo.
Sqirlz Morph Isikhokelo. Indlela yokwenza moph ubuso bakho
Funda ukusebenzisa iSqirlz Morph ukuguqula phakathi kobuso. Sebenzisa esi sifundo sevidiyo, kubandakanya inyathelo ngenyathelo ngenyathelo lokuziphatha ngokukhululekileyo enkosi kuSqirlz Morph.
Iinkqubo zokuhlala kwabahlali ziyintsikelelo kunye nentloko. Funda konke malunga neenkqubo zokuhlala kunye nale nyathelo ngenyathelo ngenyathelo ...
Yazi yonke into malunga noMthunywa
Umthunywa. Konke malunga nokubuyiselwa kwe-MSN Messenger, iWindows Live Messenger. Funda indlela yokufaka, ukumisela kunye nokuyisebenzisa ngezi zifundo zenguqulo entsha yoMyalezo.
Uwadibanisa njani amanqaku akho namaphepha eendaba anje ngeMeneame, Enchilame, Fresqui, Technorati, njl.
Ukuba awazi ukuba ungawaqhagamshela njani amanqaku akho kumaphepha aphambili eendaba, funda le ncwadana incinci apho uya kufunda indlela yokudibanisa ibhlog yakho neMeneame, Fresqui, njl. ...
Isabelo esishushu.Indlela yokwabelana ngeefayile zemultimedia phantse ngaphandle kwemida.
Isabelo esishushu yindawo yokugcina simahla yemultimedia engenamida yokukhuphela. Ngenisa kangangoko ufuna ukwabelana ngako! Funda ukuba ungayisebenzisa njani le ncwadana.
Abaguquleli abakwi-Intanethi. Ungaguqulela njani kwifomathi enye ukuya kwenye ngaphandle kokufaka nayiphi na inkqubo
Sebenzisa abaguquleli abakwi-Intanethi ukuguqula iifayile ukusuka kwifomathi enye ukuya kwenye ngaphandle kokufaka naluphi na uhlobo lwenkqubo kwikhompyuter yakho. Ezi zezona zilungileyo ...
Izaziso zikaGoogle. Uhlala njani unolwazi ngezinto onomdla kuzo
Izilumkiso zikaGoogle zikuvumela ukuba uhlale unolwazi ngaso nasiphi na isihloko osithandayo, funda isifundo endisenzileyo, ukuze ufunde indlela yokwenza ezakho izilumkiso ngeZaziso zikaGoogle.
Ungasitshintsha njani isantya sokurekhoda kwiNero 7. Ukuphucula ukurekhodwa kwethu
NgeNero 6 kwakulula ukubona isantya sokurekhoda, iNero 7 entsha ifihliwe, kodwa hayi kangako, funda le ncam encinci kwiVinagre Asesino blog kwaye uyazi ukuba ungasitshintsha njani isantya sokurekhoda kwakho
Iifayile ze-THM kunye neekhamera zedijithali (ifoto okanye ividiyo)
I-THM: Ukuba uhambisa ifayile esuka kwikhamera yakho ukuya kwikhompyuter yakho kwaye uhlangabezana nolwandiso, funda esi sithuba ukuze ufumanise ukuba zeziphi ezi fayile ngolwandiso lwe "HTM".
Uphi i-eMule egcina iikhredithi? (Inxalenye yesi-2)
Inxalenye yesibini yesikhokelo esincinci kwiikhredithi ze-eMule. Apho bakhoyo, bafikeleleka njani, zithini iikhredithi ...
Awunakho ukubukela iividiyo zikaYouTube? Apha sichaza inyathelo ngenyathelo indlela yokulungisa le ngxaki ngevidiyo zeYouTube.
Apha uya kufunda indlela yokutshisa imovie ngeDVD shwabanisa inyathelo ngenyathelo kwaye ngokulula ngenkqubo engenasimahla.
Apha uya kufunda inyathelo ngenyathelo lokutshisa iDVD yedatha kunye noNero kwaye uya kufumana uninzi lwezifundo ezininzi.
Uyitshisa njani i-DVD maleko kabini kwiDVD eqhelekileyo
Apha uya kufunda indlela yokutshisa iiDVD ezimbini kwiDVD eqhelekileyo (umaleko omnye)